Ireo mpizaha sary tsara indrindra ho an'ny Mac | Vaovao momba ny gadget
Ny angona fampiasana farany izay navoaka momba ireo fitaovana ampiasaina hampifandraisina sy amin'ny Internet, dia mampiseho amintsika izany nanjary ankafizin'ny mpampiasa ny fitaovana finday sy ny takelakaNy solosaina sy solosaina finday dia mbola misy eo amin'ny fiainan'ny mpampiasa marobe, indrindra ho an'ireo izay mampiasa azy ireo amin'ny asa, fa tsy ny fahitana fotsiny ireo tambajotran-tserasera, mailaka ary fitsidihana ilay pejin-tranonkala hafahafa.
Na dia notsikeraina foana aza fa afaka mandeha amin'ny fampiharana kely ny ecosystem Apple rehefa misafidy izay mety indrindra amin'ny filàna sasany, ny marina dia afaka mahita ankehitriny isika maro an'isa amin'izy ireo mba hanao asa saika. Raha ny marina dia misy ny rindranasa izay tsy mifanaraka amin'ny Windows ihany, olana iray izay efa nifamadika hatrizay.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ireo mpizaha tena be mpampiasa indrindra amin'ny ekôzôjika Apple, tsy lazaina intsony ireo efa ela no nitsahatra tsy nahazo fanavaozana fa tamin'ny fotoan'izy ireo dia safidy nisaina izy ireo, toa ny raharaha Camino, Sunrise Browser na Rocketmelt, ity farany dia nijanona tsy nanavao ny fampiharana azy rehefa azon'i Yahoo
Mazava ho azy fa tsy afaka manomboka an'ity lisitra ity isika raha tsy misy ny mpitety Apple ofisialy ho an'ny Mac. Ny mpitety tranonkala Safari, tafiditra ao anaty rafitra no safidy tsara indrindra azontsika atao raha tiana ny mifanentana, miasa tsara ary fanjifana bateria tena tsara. Izy io koa no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mampiasa fitaovana finday Apple, noho ny fampifanarahana tsy ny ankafizinao ihany, fa ny tantara koa, ny tenimiafinao amin'ny alàlan'ny iCloud Keychain ...
Raha ny resaka fandidiana sy ny fahombiazany dia tsy misongadina mihoatra ny salan'isa i Safari amin'ny fotoana rehetra, zavatra tokony hatao raha jerena ny fampidirana sy ny rafitra miasa. Browser ofisialin'i Apple manohana ihany koa ny fampiasana fanitarana, na dia voafetra be aza ireo izay hitantsika raha ampitahaintsika amin'ireo izay misy amin'ny Chrome sy Firefox.
Opera dia teo amin'ny filaharana misy ny mpizaha malaza indrindra sy be mpampiasa indrindra, na amin'ny Mac na Windows, na dia efa elaela aza dia toa napetraka ny batery ary tsy mijanona manampy endri-javatra vaovao izay tsy misy amin'ny mpitety hafa, toy ny fahafaha-mampiasa ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra toa ny Facebook Messenger, Telegram na WhatsApp amin'ny varavarankely misaraka nefa tsy mila mampiasa ny vakizinao manokana. Ireo safidy fandefasan-kafatra vaovao ireo dia azo alaina ao amin'ny kinova faha 46.
Ho fanampin'izany, mamela antsika hikirakira ny tontolon'ny browser ihany koa izy io mba hampisehoana amintsika sary miavaka samihafa, noho ny safidy marobe atolotray antsika ho azy, zavatra izay tsy azontsika atao ao amin'ny Chrome na Firefox. Amin'ny alàlan'ny fampisehoana aminay ny safidin'ny mpitety rehetra eo amin'ny sisiny, ny habaka fitetezana dia lehibe kokoa sy madio kokoa, zavatra izay tsy isalasalana fa ankasitrahana.
Hatramin'ny nanombohana ny kinova voalohany an'ny mpitety Google, dia nahazo tombony tsikelikely teo amin'ny tsena mandra-pahatongany lasa mpitety tranonkala be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, raha miresaka momba ny kinova amin'ny birao sy ny solosaina birao isika. Raha miresaka momba ny fitaovana azo entina isika, Chrome dia ny mpizahatany izay tokony hijanonantsika lavitra araka izay tratra, satria na eo aza ny fanavaozana samihafa hanatsarana ny fahombiazany, ny kinova ho an'ny macOS dia mbola loharanom-pahalalana.
Chrome, toa ny Safari, dia mamela antsika hampifanaraka ny tsoratadidy, ny tenimiafintsika ary ny tantarantsika amin'ireo fitaovana rehetra ametrahana azy sy mampifandray azy amin'ny kaonty iray ihany. Ny isan'ny fanitarana azo alaina ho an'ny Chrome dia avo dia avo raha mividy azy amin'ny mpizaha hafa hafa, fanitarana ahafahantsika maka izay zavatra rehetra tonga ao an-tsaina ho sary. Iray amin'ireo fanavaozana farany indrindra an'ity browser ity fidirana amin'ny plugins tsy sembana ka tsy afaka hanafoana safidy sasantsasany manelingelina ho an'ny mpampiasa sasany intsony izahay, toy ny plugin hanokafana rakitra amin'ny endrika PDF avy amin'ny mpitety.
Raha mila browser ianao miaraka amina fanitarana marobe nefa aorian'izay dia tsy hita ao amin'ny Google zoky lahy lehibe, Firefox no safidy tadiavinao. Na eo aza ny zava-misy fa Firefox dia fitetezam-bika mahomby kokoa amin'ny resaka fanjifana sy ny fahombiazana noho ny Chrome, satria tsy tohanana orinasa lehibe izy, ny anjaran'ny tsena dia avo lavitra noho ny ahitantsika azy amin'ny mpitety hafa. Amin'izao fotoana izao dia misy amin'ny sehatra rehetra ny Firefox, mba hahafahanay mampifanaraka ireo tsoratadidy, tsoratadidy ary tantaranay amin'ireo fitaovana rehetra mifandraika amin'ilay kaonty iray ihany.
Raha miresaka momba ny fanitarana isika dia manolotra fampiharana be dia be i Firefox hahafahantsika manatanteraka asa rehetra amin'ny fitaovantsika. Ny fototr'i Mozilla, ao aoriany misy hatrany io fanamoriana io niavaka tamin'ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, tsiambaratelo izay zara raha hitantsika ao amin'ny Chrome raha tsy mandeha lavitra.
Amin'ny fahamendrehany manokana, Vivaldi, iray amin'ireo mpijery farany nahatratra ny tsena, dia manamboatra ho azy manokana. Vivaldi dia teraka tamin'ny tanan'ny CEO taloha an'ny Opera Software, izay nandao ny orinasa rehefa namidiny tamin'ny orinasa sinoa ny ankamaroan'ny orinasa. Ny lafiny fahitana an'ity browser ity dia mitovy amin'ny Opera, indrindra noho ny sidebar izay misy ny safidy fikirakirana sy ny opération rehetra. Io dia ahafahantsika manova ny toerana tiantsika haseho ihany koa ireo takelaka misokatra sy ampanjifaina ny afara.
Vivaldi dia manolotra bokotra iray ho antsika tonga dia manakana ny fampidirana sary rehetra an'ireo tranokala notsidihinay, mety indrindra rehefa mampiasa ny tahan'ny angon-drakitra mifampizara izahay. Manome antsika an-toerana ny Google ho toy ny motera fikarohana, motera fikarohana azontsika ovaina amin'ny hafa toy ny Amazon, Wikipedia, eBay, DuckDuckGo, WolframAlpha na Startpage amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry.
Ny fampiasana Tor dia nifandray tamina olona te mitety tranonkala mainty, raha ny marina dia io no fomba tokana ahafahana manao azy. Saingy tsy izy irery no lahasa natolotry ny mpitety tranonkala ity, miorina amin'ny Firefox, satria mamela antsika hitsidika takelaka tsy mitonona anarana ihany koa izy io nefa tsy mamela soritra noho ny serivisy serivisy VPN, izay indraindray mety ho olana amin'ny hafainganam-pandehan'ny fitetezana.
Ankoatra izany manarona ny fihaviantsika rehefa mizaha, manakana ihany koa ireo doka mahafinaritra izay aseho amin'ny pejin-tranonkala sasany tsy haseho. Tor no mpizahatany ankafizin'ny troll, ireo izay tia mamorona resabe miaraka amin'ny fanehoan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny feony, satria rehefa mampiasa IP tsy fantatra anarana dia tsy azo atao ny manakana ny IP-dry zareo fotsiny mba hijanona trolling.
Toy ny mpanamory maro voalaza ao amin'ity lahatsoratra ity, Torch Browser dia mifototra amin'ny Chromium fa tsy toa an'i Chrome, natao ho an'ny fanjifàna horonantsary sy mozika indrindra, horonan-tsary sy mozika azontsika sintonina haingana tsy ampiasana ireo fanitarana mifanentana. Fa koa mampifandray mpitantana torrent, izay ahafahantsika misintona rakitra toy izao nefa tsy mila mampiasa rindrambaiko an'ny antoko fahatelo. Satria tsy toy ny navigateur tsy nohamarinina tahaka ny Chrome, raha manararaotra ireo fanitarana Torch Browser isika dia mety ho lasa olana kokoa noho ny vahaolana, satria ny asany dia hanomboka hiadana kokoa noho ny mahazatra.
Azo sintonina maimaimpoana ny Touch Browser.
Ny mpizaha Maxthom dia natao ho an'ireo izay mitaky a mpitety avo lenta, noho ny motera fikarohana vaovao nohavaozina. Ankoatr'izay, tsy toy ny Chrome, ny fanjifana angovo entiny amin'ny fitaovana finday ao Apple dia somary tery ihany, ka nahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny Safari. Maxthom dia mamela antsika hiditra haingana amin'ny tantara nefa tsy mila mivezivezy amin'ny menus samihafa. Izy io koa dia manana mpitantana fampidinana izay mampahafantatra antsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny fandrosoany, ahafahantsika mamerina azy ireo avy eo.
Developer: Ny sandan'ny anjara Maxthon Technology Limited
Yandex no Chrome an'ny Andrefana. Yandex dia Google of Russia sy ny manodidina azy, ary toa an'i Google dia manome antsika koa ny mpizaha azy manokana, mpizaha iray izay miavaka amin'ny iray amin'ireo haingam-pandeha indrindra azontsika jerena ho an'ny tontolo iainana Apple. Yandex Browser dia manome antsika fiarovana azo antoka amin'ireo tranonkala mampidi-doza, tranokala izay misy malware, kankana sy hafa, satria efa fahita matetika ny mahita ireo karazana aretina ireo ao amin'ny ekosistra Apple.
Rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ho an'ny besinimaro tsy voaro isika dia hampandre antsika mialoha i Yandex mba hitandremantsika tsara amin'ny fampahalalana kasainay hizara amin'ny hafa, hevitra tena tsara indrindra ho an'ireo izay tsy dia miahiahy loatra momba ny filaminana fa izay manenina mafy izy ireo avy eo. Toy ny Opera koa mamela antsika hanamboatra ambadika ny efijery an-trano. Ny motera fikarohana Rosiana koa dia manome antsika rindranasa ho an'ny iOS sy Android, mba hahafahantsika mampifanaraka ny fifandraisantsika avy amin'ny kinova desktop miaraka amin'ireo an'ny smartphone.
Raha toa ianao tia ireo fihetsika natolotry ny trackpad na ny Apple Magic Mouse, Sleipnir no fitetezanao. Raha ny filazan'ny mpamolavola azy dia namorona Sleipnir araka ny tsirony sy ny tiany izy ary namorona «browser» araka ny itiavany azy. Amin'izany fomba izany, afaka mipetraka am-pilaminana ao amin'ny sezantsika isika ary amin'ny alàlan'ny trackpad na Magic Mouse fotsiny dia afaka mivezivezy haingana ireo tranonkala ankafizintsika isika. Mazava ho azy fa mifanaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry koa izy, hitsin-dàlana fitahiana, izay ahafahantsika manafaingana ny fitetezana. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, Sleipnir Browser dia mamela antsika hiara-hisokatra tabilao 1.000 XNUMX miaraka amin'ny fotoana iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » Ireo mpitsidika tsara indrindra ho an'ny Mac